Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. २ महीनामा २ लाखभन्दा बढी पर्यटक – Emountain TV
२ महीनामा २ लाखभन्दा बढी पर्यटक
काठमाडौं, २९ फागुन । सन् २०१९ को २ महीनामा पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिएको छ । जनवरी र फ्रेबु्रअरी २ महीनामा २ लाख १६ हजार ६ सय १४ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको तथ्यांकअनुसार हवाई तथा स्थलमार्ग हुँदै जनवरीमा ९१ हजार ७ सय ९३ जना र फेबु्रअरीमा १ लाख २४ हजार ४ सय २१ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
यस वर्षको जनवरी र फेब्रुअरीमा आएका पर्यटकको संख्या सन् २०१८ को ती २ महीनामा आएका पर्यटकको संख्याभन्दा क्रमशः २५ र ३९ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको २ महीनाको तुलनामा भने यस वर्षको २ महीनामा पर्यटक संख्या ३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । फेब्रुअरीमा सार्क राष्ट्रबाट ३१ हजार ८ सय ३१ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो संख्या पनि गतवर्षको भन्दा ८५ प्रतिशत बढी हो । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।